Umcimbi womshado ngokuvamile uhlotshaniswa nokuhalalisela kanye nezipho kwabashadayo. Futhi kunjalo ngempela. Ngemuva kwalokho, ngesikhathi somshado ekhelini labo lizwakala imiyalo eminingi, amagama amnandi nama-toasts. Kodwa-ke, umzuzwana ufika lapho abashadikazi abasha kufanele basuke etafuleni, bathathe imakrofoni ezandleni zabo bese bethi amazwi okubonga. Zibhekiswe kubani? Inkulumo enhle ihlelwe kanjani emshadweni? Okufanele ukwenze phakathi nalesi senzo, uzofunda kusuka kusihloko sethu.
Kungani futhi yini ongayisho kulabo abasanda kushada
Ngesikhathi somkhosi womshado, labo abasanda kushada, njengoba bekushoyo, bahlale bephendula impendulo zabo, izihlobo, abangane, ozakwabo kanye nabo ekilasini. Benza nje konke, balalele ukuhalalisela, futhi ekugcineni nje kufanele basho ukubonga kwabo bonke abakhona ukuhalalisela, izipho, amagama ahlukanisayo, futhi okubaluleke kakhulu, ngalolo suku olubalulekile izivakashi zabo, baphonsa zonke izindaba zabo futhi beza Umkhosi. Futhi-ke, umakoti nomkhwenyana bayababonga abazali babo ngomusa nangothando abafaka kuzo.
Inkulumo yabashadile abasanda kushada emshadweni ingabizwa ngokufanele ngokuthi umzuzu osithinta kakhulu nomnandi. Futhi ukuze ibe yinto enhle futhi eguquguqukayo, kubalulekile ukukhipha isampula ngesikhumbuzo kusengaphambili futhi, nakanjani, ukuyifaka esimweni esivamile somcimbi onzima. Izibonelo zezikhalazo ezihlukahlukene zizocatshangelwa ngezansi.
Kunezinketho eziningi zokuthi ungasho kanjani amazwi okubonga izivakashi nezihlobo. Isibonelo, kungaba yinkondlo enhle, okhethwe ngabanye kumuntu ayebhekiswe kuwo ekuqaleni. Noma ungasho i-prose, kodwa izozwakala ngokwemvelo futhi kusukela enhliziyweni. Ukubukeka kwangempela kanye nomculo womculo wokubonga, isibonelo ngesimo seculo. Ngesikhathi esifanayo, ingenziwa ngabashadayo ngokwabo, kanye nomculi ochwephelwayo noma umculi.
Phakathi kwezinye izinto, inkulumo enhle yomshado ingaxhaswa ngezinto ezincane ezinjengeyincwadi engalibaleki noma indondo. Ngaphezu kwalokho, zingenziwa ngokusebenzisa ukukhethwa okuhlekisayo nezihloko. Isibonelo: "Idiploma yokusiza emfundweni yendodakazi yakhe", "Umdanso ngesibindi empini yokunakekela indodakazi yakhe", "iDiploma yemfundo yendodana yakhe," njll.
Amazwi amnandi okubonga abazali
Abantu bokuqala abafanelanga nje amazwi okubonga, kodwa futhi nomnsalo ophansi, ngabazali. Bayakunakekela, bayakufundisa, abalala ebusuku, futhi ezimweni eziningi bahlanganyela kuzo zonke izici zenhlangano yomcimbi wokugubha lomshado ozayo.
Inkulumo enhle yomshado kuyindlela enhle yokubonisa ukubonga emndenini wakho kukho konke abakwenzile. Kwenzeka cishe ngale ndlela: ihange noma umphathi wezintambo unikezela uphawu kumculi, futhi umculo uyeka, bese umakoti nomkhwenyana bema. Khona-ke umakoti uqala ukukhuluma kwakhe: "Ngalolu suku oluhle, ngithanda ukubonga umama ngoba ngosizo lwami ngazalwa. Ngomusa wakhe nangothando lwakhe. Kungenxa yemizamo yakhe engimi phambi kwakho namuhla. Ngiyabonga, othandekayo! "
Khona-ke uphendukela kuyise futhi uthi: "Ngalolu suku, ngifuna ukukubonga, baba! Ngoba ubelokhu usisekela futhi usisekela umama. Ngenxa yokuthi wayehlale efaka ihlombe lakhe elinamandla lapho edingeka khona. Siyabonga nomnsalo ophansi! "Ekuphenduleni lesi sikhalazo, ungazwa inkulumo kamama. Emshadweni wendodakazi noma indodana - lena ingenye yamaphuzu aphambili. Ekulungiseleleni inkulumo enjalo akufanele ikhohlwe.
Inkulumo yomshado: isibonelo kubazali bomyeni
Ngemuva kwekhono lacacic, kodwa egcwele inkulumo yokukhuluma, umakoti uthi amazwi okubonga abazali bomyeni wakhe: "Ukushada akulula futhi ibhizinisi elinzima. Ngakho-ke, ngalolu suku, ngifuna ukukubonga (igama kanye nomuntu obizwa ngokuthi ngabazali bomyeni wami) ukusizwa okusheshayo ekuxazululeni iningi lezinkinga zenhlangano. Siyabonga ngabo bonke usizo lwakho nokusekela. "
Ngokulandelayo, ngokusho kweskripthi, umakoti uhlezi endaweni yakhe. Manje inkulumo yokubonga emshadweni yinkathazo yowesifazane wakhe osemusha. Ubuye abuyele kubazali bakhe kuqala athi: "Ubaba nomama wami othandekayo! Ngiyajabula kakhulu ukuthi weza ukuzosekela kulo mzuzu obalulekile futhi ongawukhumbulekayo. Siyabonga ngokukhula, ukufunda nokusiza ukuhamba ngezinyawo. Ngaphandle kwakho, ngingeke ngiphumelele. Uhlale unami, usekelwa futhi uvikelwe. Namuhla nginomndeni wami, engizowunakekela ngomfanekiso wakho nokufana. Siyabonga ngakho konke! "
Inkulumo yokubonga ngabazali bomakoti
Ngemuva kokuba umkhwenyana ehloniphe abazali bakhe, kufanele akhulume nonina nobaba: "Othandekayo (igama kanye nabazali)! Ngosuku oluhle kakhulu, ngiyajabula ukukubonga ngemizamo oyenzile ngesikhathi sikhuliswa indodakazi yakho. Ngiyabonga, ngahlangana futhi ngithanda lesi sidalwa esibukeka kahle (igama lomlobokazi). Uyinto engcono kakhulu futhi enomusa enginayo ekuphileni. Siyabonga ngokusiza ukuhlela leli holide, ukukhathazeka, ukunakekelwa nothando. Umnsalo ophansi kuwe. "
Ngumuphi amazwi okubonga okushiwo umama wendodakazi yakhe?
Ngokuvamile, ngenxa yokudumisa okungokomoya kwabathandekayo babo, abazali benza isenzo esivumelanayo. Isibonelo, kungaba yintetho yomama emshadweni wendodakazi:
"Ngibonga kakhulu ukudumisa kanye namazwi amnandi enhliziyweni! Ngiyajabula ngokuthi ngiphila ekugcineni lapho indodakazi yami ingongibonga ngakho konke. Yiqiniso, njenganoma imuphi umndeni akakwazi ukwenza ngaphandle kokudlula. Kodwa ngingathanda lokho empilweni yakho bebancane ngangokunokwenzeka. Jabulela futhi ugcine lokho onakho. Iseluleko kuwe futhi uthande! "
Yimaphi amazwi ubaba athi endodaneni yakhe?
Impendulo yokubonga okude nokuqotho kwezingane zabo kuyakuba yinkulumo engakhohlwayo kayise emshadweni wendodana yakhe. Ngokwesibonelo, angasho ukuthi:
"Ndodana yami ethandekayo! Ngiyajabula ukuthi ngiphila ukuze ngibone lolu suku oluhle. Namuhla uye waba ngubaba wangempela womndeni kanye nendoda enenhlamvu enkulu. Khumbula futhi ulalele zonke izeluleko engake ngikunike zona. Vumela okuhlangenwe nakho kwami namazwi okuhlukanisa kube usizo kuwe. Thina nomama, sithembisa ukukusekela futhi sikusize ezigabeni zokuqala zokuphila kwakho ndawonye. Iseluleko kuwe futhi uthande! ".
Inkulumo ehlukile kayise emshadweni wendodana yakhe: "Sonny! Ngikuhalalisela ngalolu suku oluhle kithi sonke - usuku lwakho lomshado. Ngifisa wena injabulo enkulu, uthando nenhlanhla kuzo zonke izindaba zomndeni wakho. Vumela ingelosi yomlondolozi ikugcine wena nomndeni wakho. Jabulela! "
Amazwi okubonga abazali ngesinkwa nosawoti
Uma emkhosini wakho womshado konke kuhamba ngokuvumelana nesimo sendabuko, lapho abazali bekunika isinkwa nosawoti, kufanele ukhumbule ukubonga ngakho. Sikunikeza izibonelo zale nkulumo. Umakoti nomkhwenyana bathi ndawonye: "Umama wethu othandekayo futhi othandekayo nobaba! Yamukela kithi amazwi okubonga ngokusuka enhliziyweni ukuthi lesi sinkwa esimangalisayo sanikezwa kithi ngomzuzwana obalulekile ngathi. Lesi yisidlo esingcono kakhulu esake sabonisana ndawonye. Sithembisa ukuthi sithandane futhi singalokothi sikhohlwe ngawe, izihlobo zethu! "
Enye inkulumo enhle yomshado eyenziwa abashadile: "Abazali bethu abathandekayo! Mina nomkami siyabonga ngokufudumala osinike lona lesi sinkwa somshado. Sithembisa ukuthi siyothandana futhi sithandane, njengoba nje wethule lesi sipho esihle kakhulu kithi. Sithemba ukuthi ngeke usishiye esimeni esinzima futhi uzohlala nathi njalo. "
I-Thanksgiving evela kuzivakashi ezincane
Sibonga ngokukhethekile kulabo abasanda kushada banesibopho sokutshela izivakashi zabo eza, behalalisiwe futhi banikeza izipho eziningi ezibalulekile. Isibonelo senkulumo yokubonga: "Izivakashi ezithandekayo! Siyajabula ngokuthi ufike emshadweni wethu. Siyabonga ngamazwi amnandi, ngamagundane amahle futhi afundisayo, ngezipho nezinye izimpawu zokunakwa. Siyazisa futhi sikuhlonipha! Ngiyabonga kakhulu ngokuba khona! "
Nansi enye inkulumo yabashadile abasanda kushada emcimbini, eqondiswa izivakashi:
"Siyakwamukela zonke izivakashi ezibuthene lapha. Namuhla sineeholide - usuku lomshado oluyimpumelelo. Ngalesi sikhathi, sifuna ukusho okukhulu ngokukubonga ngokungakhohlwa thina, naphezu kwakho konke, beza futhi behalalisiwe, basinika amazwi amaningi amnandi futhi anomusa. Ngingathanda ukukusho ngokukhethekile ngiyabonga kulabo bantu ababambe iqhaza ekwakhiweni nasekuhleleni komshado. Ngaphandle kwabo, ukugubha kwethu kwakungeke kwenzeke. Siyabonga konke! "
Phendula omunye wezivakashi ukuhalalisela
Impendulo yamazwi amnandi okubonga ukubonga abashadile iyoba inkulumo yomvakashi emshadweni. Isibonelo, kungaba ngumuntu osebenza naye noma osebenza nabo. Uthi: "Ngiyabonga ngamazwi amahle wombhangqwana omuhle. Ngikukwazi isikhathi eside kakhulu, cishe kusukela ebuntwaneni. Uhlale ube ngabantu abathandekayo: abahlonishwa futhi behlonishwa ngabadala, abalungile nabathembekile, babelane ngokugcina nabangani bakho, bahlonipha izihlobo nabangane bakho. Siyakuhalalisela ngosuku lwakho lomshado. Sifisa ukuba uhlale njengakho futhi udlulisele lonke ulwazi lwakho namakhono kubantwana bakho nabazukulu. "
Yimaphi amazwi okukhetha umngane emshadweni?
Noma kunjalo, kungenzeka ukuthi umshado awunayo, kodwa nomngane wakho. Ake sithi umenyelwe kulo mcimbi omuhle, futhi omunye wokubonga wukuthi nguwe obekufanele ulungiselele inkulumo yokubongela ngomshado womngani. Ngakho, ungasho lokhu: "Othandekayo (igama lomkhwenyana) nomnandi (igama lomlobokazi)! Ngiyajabula ukuthi ngiya emshadweni wakho. Lusuku oluhle kini bobabili, engifuna ukukufisela injabulo, impumelelo, umthombo ongapheli wothando, injabulo nokuchuma. "
Isifingqo: Amazwi wokubonga - lokhu okungekho umshado ongakwenza ngaphandle. Izinkulumo zizokujabulela ukuzwa kokubili abadala nabantwana. Into eyinhloko ukuthi uzozilungiselela ngokucophelela indima yakho, ulungiselele inkulumo yomshado womngani, umngane, futhi unakekele izikhathi ezimnandi kubazali, izihlobo nezivakashi.
Kanjani ukuze ulayishe ku "Instagram" kusuka kwikhompyutha yakho: imfundo nezeluleko